Date My Pet » Ianao Dateable?
amin'ny Carisa Peterson
Last nohavaozina: Feb. 20 2020 | 3 min namaky
Ny lisitra ny fomba hahafantatra ny tenanao ho kely kokoa, mahatonga anao "kely ny lotta" dateable kokoa
Ny fahadisoana ny olona maro manao ny mampiaraka fiainany dia tsy manana hevitra tsara ny hoe iza izy, ny tenany, dia. Mety ho toy ny antenaina, fa ny Mazoto tsy niezaka ny hitady mpiara-miasa no iray amin'ireo fotoana tsara indrindra mba hifantoka amin'ny tenanao, ary inona no mahatonga anao “mifidy”. Vehivavy, bebe kokoa noho ny lehilahy, dia mora ny “Na inona na inona mahafinaritra ahy Tianao”-Aretina (angamba mbola tsy ara-kolontsaina noho fanantenana hoe ny vehivavy, tokony ho ny malefaka, amorphous olona tsy ampy ny tombontsoany), amin'ny farany ka nahazoana mahafa-po sy ny fifandraisana amin'ny tsara indrindra unfulfilling; sy ny tsy ampoizina, very maina ny fotoana sy ny fahatezerana ao amin'ny olona hafa manana “niova”, amin'ny ratsy indrindra.
Ny iray ny toerana tena teny dia mitovitovy amin'izao–ahoana no tokony ho olon-kafa hahafantatra sy ho tia anao, raha tsy hahafantatra sy ho tia anao? Mampiasa vola amin'ny mahalala ny tenanao mamela anao ny hahafantatra tsara izay hahatonga ho eo amin'ny latabatra, ary mahatonga mora kokoa ho anao sy ny Right Iray ny manaiky ny tsirairay, ary ho voasariky ny toetra izay tsy ho miova amin 'ny orinasa na ny taona.
Araka ny Silverstein Shel manoratra ao amin'ny tononkalo, “Saron-tava”:
Nanana manga hoditra
Dia nanao izany izy
Dia nankatò izany nanafina
Ary toy izany koa izy
Dia nitady manga
Ny fiainana manontolo amin 'ny alalan
Ary lasa tsara amin'ny–
Ary tsy nahalala
Ireto misy fomba vitsivitsy hahafantatra sy ho tia anao, ka olon-kafa afaka, koa!
1. Raiso ny Tenanao Out
Ity iray ity dia Roahina manodidina isan-karazany sy ny maro karazana “tena fanampiana” gurus, boky, sy ny vehivavy ny vondrona. Matetika ny olona mieritreritra momba izany eo amin'ny lafiny sakafo hariva, izay mety ho fandrahonana sy hafahafa raha tsy nisakafo ampahibemaso irery eo anatrehan'ny. Noho izany dia mety ho tsy manan-danja ankalamanjana, raha mbola tahaka ny voly sy zavatra tianao–sarimihetsika (indray mandeha ny jiro nidina, tsy misy olona dia mifantoka amin'ny izay mipetraka irery), lalao baolina, na angamba lavitra any ho any ny andro vaovao.
2. Inona no tianao hatao ankehitriny?
Manana fotoana malalaka? Mijanòna ho iray minitra, ary sahy manontany tena inona no hahatonga anao ho sambatra eo no hanaovana izany ary–ary avy eo dia mandehana manao izany! Izany no iray amin'ireo fomba tsotra sy mahomby ho miray feo ny fikotrokotroky ny fiainana sy hijanona fandaniam-potoana amin'ny alalan'ny rehefa ninonoanao ho Facebook na fahitalavitra. Koa manokatra anareo ho amin'ny kisendrasendra fa maro kokoa, mahagaga ahodiny sy nifandimby, ary nivory ny olona maro kokoa noho ianao hanana, tsy voahevitra sy tsy nahy famonoana ny fotoana. Ao amin'ny dingana, dia ho hitanao fa tsy mila olona niaraka mba ho sambatra–ianao dia ho faly sy Nandefitra amin'ny alalan'ny fanehoana tanjona amin'ny safidy.
3. Anontanio ny Friends
Izany no karazana ny famolavolana ny asa malaza Facebook mangataka ny olona hanome valin-ny lahatsoratra miaraka amin'ny teny izay mamaritra ny peta-drindrina. Fa ianareo kosa dia afaka mianatra momba ny tenanao, na farafaharatsiny ny sary an-tsaina ny vahoaka sy ny fahatsapana ny tenanao, amin'ny fanontaniana ny namany izy ireo ny fomba hamaritana anao. Hanampy mba hanazava ny “Ianao” fa ianao manolo-ho an'izao tontolo izao, ary noho izany daty. Angamba, ary tena mety, izany mifanaraka amin'ny izay mino no tena tena. Fa raha tsy nahy heverina ho manana toetra hafa noho ny zavatra fantatrao fa marina ny momba anao–Mety ho toy ny kofehy maneho ny tsy nahomby, mampisafotofoto fifandraisana.
4. Andramo New Things
Izany no karazana ny mifanohitra amin'ny #2. Raha tokony hitsaboana tena ho zavatra fantatrao ianao manao toy, manao zavatra vaovao tanteraka! Tsy nitaingina soavaly eo anatrehan'i? Mitadiava ny orinasa izay manome lalana mora mitaingina. Dia tsy mba manao na inona na inona mpisolovava tena mampahatahotra ny pataloha eny ianareo, satria–raha izany dia mety hisarika ny daty–ny tahotra dia mety hanelingelina tsy ho afaka nankafy Zava-baovao. Rehefa nifarana ny andro, dia efa mitoka-monina ny fiainana iray hafa izay manampy mamaritra ny traikefa sy ny zavatra mahaliana anao, ary mety manana fahaiza-manao sy ny resaka hafa teboka mba hitondra ho amin'ny latabatra.
Ny fananana ny fahatsapana matoky tena dia tsara tarehy. Miezaka ny hevitry ny tena, ianao, dia ho sambatra kokoa, tanteraka kokoa ny olona, ​​ary hanana izany bebe kokoa ho atolotra ny fifandraisana; ary ao am-piandrasana izany, ianao manana be dia be mahafinaritra mifankahalala ny aminareo fa ianareo rehetra ny.